Xiaomi Mi VR, iko ọhụụ ọhụụ ọhụrụ sitere n'aka ndị nrụpụta China | Akụkọ akụrụngwa
Xiaomi Mi VR, iko ọhụụ ọhụụ ọhụrụ sitere n'aka ndị nrụpụta China
Xiaomi taa mere emume na Beijing nke kpakpando buru ibu ya bu ihe Xiaomi Mi 2, Ekwentị mkpanaka dị ike nke nwere ihe ịga nke ọma nke na-echetara nke Galaxy Note 7 na akụkụ nke ga-emeri ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọrụ gburugburu ụwa, agbanyeghị, e nweela ohere maka ngwaọrụ ndị ọzọ, n'etiti nke doro anya na ọ bụ Xiaomi Mi VR.
Ngwaọrụ a bụ ole na ole ezigbo iko anya, nke dị elu ma e jiri ya tụnyere ihe niile anyị hụburu na ihe mmetụta dị iche iche na-enweghị onwe ha na nke ekwentị, ihe na-enweghị obi abụọ nwere ekele.
Ruo ugbu a, ee, Xiaomi achọghị ịnye ọtụtụ nkọwa ma ọ bụ ozi gbasara iko ọhụụ ọhụụ ọhụrụ, nke o yiri ka ha sitere na Google Daydream View nakwa na ha nwere ihe karịrị ndị mmepe aha 200, na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ iji mepụta ngwa na egwuregwu nwere ike ịmasị.
Banyere nkọwa ole na ole anyị maara, Xiaomi kwadoro na Mi VR nwere usoro ihe mmetụta nwere ike ịzaghachi mmegharị na 16 milliseconds. Ọzọkwa, dị ka Google Daydreams, ha gụnyere njikwa onwe ha na nchọpụta mmegharị na bọtịnụ.
Ọnụahịa nke Xiaomi Mi VR a ga-abụrịrị otu n'ime atụmatụ ya kachasị mma na nke ahụ bụ mgbe ha ruru ahịa Anyị nwere ike ịzụta ha maka ihe dị ka euro 27 odika, ọ bụ ezie na dị ka ọ dị na ọtụtụ ngwaọrụ sitere na ndị na-emepụta China, ọnụahịa ga-abawanye ntakịrị dịka ịnweghị ike ịzụta ha ozugbo na enweghị ndị nnọchi anya site na Xiaomi.
Kedu ihe ị chere gbasara Xiaomi Mi VR ọhụrụ na ọnụ ala dị ala nke ha ga-eji ruo ahịa ahụ?.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Xiaomi Mi VR, iko ọhụụ ọhụụ ọhụrụ sitere n'aka ndị nrụpụta China
Ogo na xiaomi n’otu ahịrịokwu hahahahaha tupu ekwere m akụkọ Akwụkwọ Nsọ
Lelee ngwakọ ngwakọ n'etiti Samsung na Sony ma echere m na onye owuwu ụzọ mbata ahụ dị umengwụ. Enwere m oculus enwere m obi abụọ na ha ka mma, Sony dị njọ